नेपाल आइडलले दर्शकहरुलाई नराम्रोसँग झुक्कायो ! - USNEPALNEWS.COM
नेपाल आइडलले दर्शकहरुलाई नराम्रोसँग झुक्कायो !
नेपाल आइडलले दर्शकहरुलाई नराम्रोसँग झुक्काएको छ । नेपाल आइडलको ‘टप फोर’मा पुगेका निशान भट्टराई, सागर आले, बुद्ध लामा र प्रताप दासमध्ये को बाहिरिएला ? भन्ने उत्कुसता बोकेर बसेका दर्शकहरुलाई नेपाल आइडलले झुक्काएको हो ।
निर्णायक मण्डलले अन्तिम प्रतिस्पर्धी चारै जनालाई फाइनलसम्म लाने निर्णय गरेपछि दर्शकहरु नराम्रोसँग झुक्किएनन् मात्रै, थप सशंकित पनि भएका छन् । शुक्रबारको शोबाट एक जना प्रतिस्पर्धी बाहिरिनुपर्ने थियो । अन्तिम तीनमध्येबाट क्रमशः ‘टप थ्री’ छान्ने निर्णायकहरुले बताएका थिए ।
एपी वान टेलिभिजनबाट प्रशारित शुक्रबारको कार्यक्रमलाई अलि विशेष रुपमा हेरिएको थियो । शुक्रबारको शो व्यवसायी तथा गीतकार बसन्त चौधरीको ‘शान्ति लुकाउँ कहाँ…’ भन्ने गीतबाट सुरु भएको थियो । जुन गीत नेपाल आइडलका चारै जना प्रतिस्पर्धीले गाएका थिए । त्यसलगत्तै चारै जना प्रतिस्पर्धीले क्रमशः आफ्नो कला पस्किए ।
शुक्रबारको कार्यक्रममा भदौ २३ गतेबाट रिलिज हुन लागेको चलचित्र चलचित्र ‘२ रुपैयाँ’ का नायकद्वय निश्चल बस्नेत र आशिक साह विशेष आकर्षण थिए । उनीहरुले पनि केहीबेर स्टेज तताए ।
दर्शकहरुको चासोको विषय भने अन्तिम तीनमा को को प्रतिस्पर्धी सीमित हुन्छन् भन्नेमै थियो । किनकी शुक्रबारको कार्यक्रमका लागि मात्र ४ जना प्रतिस्पर्धीका लागि ३७ लाख २० हजार २८४ मत प्राप्त भएको थियो ।
जब नेपाल आइडलका जजहरुको निर्णयमा ‘नो एलिमिनेशन’ घोषणा गरियो, तब दर्शकहरु झुक्किए । सामाजिक सञ्जालमा अहिले नेपाल आइडलको चर्को विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।
सगरमाथामा ४ आरोही मृत भेटिए
भारतमा पनि हुने भयो रुसमा बनेको कोरोनाको खोपको परीक्षण
बिग बोशमा अर्चना पनेरुको इन्ट्री
यूस नेपाल न्युज	 October 18, 2018